Intshayelelo yeNkampani- Anshun AKF Medical Technology Co, Ltd.
- INTSHAYELELO YENKAMPANI -
Inkampani yethu eneemfuno ezizodwa kwimveliso yeemaski zokhuselo zobuqu ze-kn95, iimaski zonyango, zonyango ezilahlwayo, sineemveliso zethu zasekhaya zonyango
iziqinisekiso, sidlulile kwimigangatho yovavanyo lwasekhaya i-Gb2626-2006, imigangatho yamazwe angaphandle en149, en 14683, njl.
Inkampani idibanisa i-R & D, uyilo, uphawu kunye nokuthengisa kunye ukuze ibe lihlabathi
inkampani edumileyo. Ngokwembono yetekhnoloji yefayibha, singena kwishishini lezempilo kwaye sinikezela ngothotho lweemaski ezilahlwayo kunye neemaski ze-kn95 kuluntu.
Umsebenzi ozimeleyo Iqela le-R & D
Njengoko sonke sisazi, ukonakaliswa kwendalo kubangele ungcoliseko lomoya kunye nokuhlasela kwebhakteria. Qho ngonyaka, abantu abangaphezu kwezigidi ezingama-20 babulawa zizifo zokuphefumla kunye nosulelo lwebhaktiriya kwihlabathi liphela. Imask ibe yimveliso ebalulekileyo kubomi bethu. Kule meko ye-globalepidemic, iMask nayo idlale indima ebalulekileyo kwinkqubo ye-Antiepidemic.
Ukusebenza okuphezulu, umgangatho ophezulu kunye nokuthelekiswa kwamaxabiso aphezulu
Imveliso eqinisekisiweyo umgangatho kunye nenkonzo
Kwi-2020, inkampani yaqala ukuvula umzi-mveliso we-mask kwinqanaba lokuqala lokuqhambuka kwesifo. Ngaphantsi kweemeko ezinzima kakhulu, inkampani inyuke ngokukhawuleza, Okwangoku, iimaski ze-ankanfuseries zibekwe kwintengiso ngobuninzi, ukubonelela ngeemveliso ezigqwesileyo kuluntu ukumelana ne-epi-demic kunye nokukhusela impilo.
- UMBONISO WENKAMPANI -
Ulwazi malunga nenkampani Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd. imi E6 mveliso yokwakha-ing, inzululwazi mveliso kunye Technology Park, Xixiu District, Liangliu Road, Xixiu District, Anshun City, kwiPhondo Guizhou, egubungela ummandla 3200 m², kunye 409 m² yokugcina yokugcina, kufuneka 2000 m² workshop kunye 420 m² iofisi kunye nendawo yokuhlala.
Inkampani yethu yinkampani edibanisa i-R & D, uyilo, imveliso kunye nokuthengisa. Sizimisele ukubonelela abathengi bethu ngeyona nkonzo intle.
I-Shun AKF Medical Technology Co, Ltd. Ngaba lishishini elitsha ebaleni leemaski, Ukusuka ekukhetheni nasekuthengweni kwezinto ukusayinwa kokupakishwa, kunye nokukhethwa koomatshini, njl.njl. .
Kuya kufuneka siqiniseke ukuba yonke imaski esivelise yona yeyona ilungileyo kule inothuli. Vumela wonke umsebenzisi wemaski ye-AKF afumane olona khuseleko lubalaseleyo.
Imephu yeshishini -
Okwangoku, iimveliso zeembaleki zikaRunbo zifunyenwe kuninzi
amazwe kunye nemimandla kwihlabathi liphela ,, kubandakanya iYurophu, i
I-United States, iJamani, i-United Kingdom, i-Australia, i-Russia, i-HongKong, njl.njl. Inkampani yethu idlale indima enkulu ngexesha lobhubhane, Sinethemba elingakumbi kunye nam